YouTube: Ahoana ny fomba hanomezana ny fahafahanao misafidy na mpaka sary miaraka amin'ny fidiran'ny mpampiasa ny fantsonao | Martech Zone
Mbola miverina ihany koa aho, miasa miaraka amina orinasa iray izay mandao masoivoho iray ary miara-miasa amiko manatsara ny fisian'izy ireo YouTube… Ary, indray, ny masoivoho niarahan'izy ireo niasa dia manana ny kaontiny rehetra. Efa nitaraina momba ireo masoivoho izay manao an'io nandritra ny folo taona mahery aho izao ary nanoro hevitra ireo orinasa mba tsy hanao izany mihitsy. Ary tsy tokony hisy raharaham-barotra hanome fidirana amin'ny fidirana sy teny miafina hitantanana kaonty rehetra.
Ny fomba mety indrindra anaovana ny asan'ny masoivoho rehetra dia ny fampiasana ireo endri-javatra asehon'ireo sehatra lehibe rehetra, manomboka amin'ny fisoratana anarana, mpampiantrano, hatrany amin'ny fantsona sosialy hanomezana ny maso ivoho fidirana mpitantana fa tsy miditra mihitsy ny faktiora sy ny fahazoana tompony. Raha tsy manao izany ianao dia misy foana ny vintana fa tsy maintsy miala ilay masoivoho ary sarotra aminao ny miverina tompony na miditra amin'ny masoivohonao manaraka. Na ny ratsy kokoa aza, ny masoivoho na mpanolotsaina miara-miasa aminao dia mety hiala amin'ny asa aman-draharaha na tsy ho afaka rehefa mila izany. Aza atahorana ny orinasanao toy izao!
Androany, hitety anao aho amin'ny fomba hanomezana fidirana amin'ny maso ivoho na mpaka sary eo amin'ny fantsonao YouTube amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo ho mpitantana ny marikao ao amin'ny Google.
Ahoana ny fomba hanampiana mpitantana amin'ny YouTube
Google dia namolavola tsimoramora ny interface sy ny safidy amin'ny serivisin'izy ireo rehetra izay ahafahanao manana kaonty marika ary avy eo manampy mpampiasa eo ambanin'io kaonty io izay manome fidirana voafetra ho azy ireo. Tsotra ny tombony an'io:
Tsy manome ianao fidirana sy tenimiafina mitsikera ary miantehitra amin'ny fahafahanao misafidy mba hiaro azy ireo.
Tsy ianao mihitsy manome fananana amin'ny maso ivoho, ka tsy misy olana raha manapa-kevitra ny hiala ianao. Midira fotsiny ianao ary manaisotra ny fidirana ho mpitantana.
Ny fahafahanao misafidy fidirana voafetra hitantana ny kaonty, raha tsy misy fidirana amin'ireo endri-javatra izay tsy tokony hananany toa ny faktiora, ny fitantanana ny mpampiasa na ny fananany.
Dingana ahafahana manampy masoivoho na mpaka sary video hitantanana ny fantsona YouTube anao
Open YouTube Studio ary kitiho ny toe-javatra eo ambanin'ny menio ankavia.
Misafidiana fahazoan-dàlana amin'ny Settings Menu ary kitiho Mitantana fahazoan-dàlana. Mety mila miditra amin'ny kaontinao eto ianao mba hahafahan'ny Google manamarina fa tompona ianao.
Ao amin'ny anao izao antsipirian'ny kaonty marika ary afaka misafidy mitantana alalana ho an'ny mpampiasa anao.
Eo amin'ny ankavanana ambony, kitiho ny kisary Manasa mpampiasa vaovao.
Manampia mpampiasa vaovao hahafahanao manampy adiresy mailaka ary koa ny anjara asan'izy ireo amin'ny kaontinao. Ny tolo-kevitro ho an'ny masoivoho na mpaka sary dia tokony hanampy azy ireo ho mpitantana.
Izay ilay… izao dia handray fampandrenesana mailaka ny mpampiasa anao hahafahan'izy ireo manaiky ny andraikiny ary manomboka mitantana ny Channel YouTube anao!
Tags: manampy manager amin'ny youtubekaonty marikakaonty marika googleahoana nomitantana alalana amin'ny youtubeYouTubeKaonty marika YouTubefantsona YouTubeMpitantana fantsona YouTubeyoutube marketingFahazoan-dàlana YouTubeMpampiasa YouTubeFahazoan-dàlan'ny mpampiasa YouTube